शक्तिखोर र सहमति-पत्र
शक्तिखोर- खासमा चितवनमा रहेको माओवादी सेनाका लडाकुहरू राखिएको स्थान हो । तर यसको केहि शाब्दिक अर्थ पनि छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ । अर्थात शक्तिमा पुगेर आफ्ना बिरोधी वा आफूभन्दा फरक मत भएकाहरूलार्इ खोर (कालकोठरी) मा जाक्ने । अर्थात जसको शक्ति उसैको जीत ! तर कम्तिमा पनि राजनैतिक दलका नेताहरूले यसलार्इ यसरी कहिल्यै नअर्थाउन भन्ने मेरो अपेक्षा छ । किनकी यसमा हाम्रो भविष्यको सवाल छ ।
खैर, अर्थ जे जस्तो भए पनि आज माघ ८ गतेका दिन भब्य समारोह भएछ यहाँ । भन्न त दलहरूले यसलार्इ ऐतिहासिक दिन भन्न छुटाएका छैनन् । तर मेरो आशंका कुन स्वरूपको ऐतिहासिकताको ब्याख्या गरिरहेछन् यिनीहरूले भन्ने नै हो ! इतिहासका सबै तिथि मितिहरू ऐतिहासिक नै हुन्छन् । देशमा राणाशासनको शुरू हुँदाको कोतपर्वको दिन होस् वा १७ सालको राजा महेन्द्रको कू होस् वा २०५८ साल जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डको दिन होस् के यी तिथीमितीहरू ऐतिहासिक छैनन् र ? विशिष्ट तर कुरो त्यो ऐतिहासिकताको पक्षको हुनुपर्छ । महत्वपूर्ण त यो छ कि त्यसको ऐतिहासिकता कति डरलाग्दो छ ? सरल भाषामा भन्दा, दलहरूले ब्याख्या गरेको आजको ऐतिहासिक दिनले समग्र देशको राजनीति कता र कुन स्वरूपमा लान्छ भन्ने हो । महत्वपूर्ण कुरा त यो हो कि अब दलहरूले आजको दिनदेखि आफूहरूमा शान्तिप्रक्रियालार्इ टुंगोमा पुर्याइ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान समयमै लेखिसक्ने जिम्मेवारी अझ घनिभूत भएको कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ ।
बुझार्इ मानिसहरूको फरक फरक हुनसक्छ । तर बुझ्नुपर्ने सन्दर्भ र त्यसका निष्कर्षहरू साझा बनाइन सक्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । म बिश्वस्त छु, आजको दिनलार्इ माओवादीबाहेकका दलहरूले अब माओवादीलार्इ ठेगानमा ल्याइयो, अब माओवादीका लड्काहरू विशेष समिती मातहत आए, यो जतिसुकै नै ठूलो दल हुम भनेर फुर्इ लाउँदै हिडोस् यसलार्इ देखाइदिने शक्ति त आज शक्तिखोरमा आर्जन गरिम भनेर सोच्ने भूल सायदै गर्नेछन् । प्रचण्डको प्रचण्डतालार्इ स्खलित गराइयो भन्ने भूल अन्य राजनैतिक दलका नेताहरूको ठनाइ रह्यो भने नेपाली राजनैतिक इतिहासमा त्यो भन्दा ठूलो भूल सायदै अर्को कुनै हुनेछ ।
सहमति पत्रमा त केबल माओवादी सेनाका लडाकुहरू बिशेष समिति अन्तरगत आउने कुरा मात्र उल्लेख छ । तर जनताले गरेको अपेक्षा, यो सहमति भनेको दलहरूबीच यथाशिध्र आ-आफ्ना हठहरू त्यागि शान्ति र संविधान निर्माणका लागि अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गर्ने साधन बनोस् भन्ने नै हो ! शक्तिखोरबाट नेताहरूले जनताहरूलार्इ शान्ति, सुशासन, संविधान र अग्रगमनको प्रत्याभूति गराउने विषयमा अझ बढी चिन्तन/मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरेर काठमान्डु फर्केका छौं भन्नेमा विश्वस्त पार्न सके भने सायद अब अर्को देविप्रसाद उनीहरूले भोग्नु पनि नपर्ला !